Fampitahana nataon'i Maxwell: tantaram-piainana sy lanjany | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 23/02/2021 10:05 | Nohavaozina amin'ny 23/02/2021 10:39 | Fisarahana
Nandritra ny tantara dia nisy mpahay siansa maro izay nandray anjara lehibe tamin'ny siansa izay nahatonga fandrosoana lehibe. Izany no trangan'ilay fizika fizika James Clerk Maxwell. Ity mpahay fizika ity dia namolavola ny teôlôjia klôtikan'ny electromagnetism amin'ny alàlan'ny fampihenana ny zava-misy fa ny hazavana dia vita amin'ny saha elektrika sy andriamby izay miparitaka hatrany amin'ny habakabaka. Ireo fanesorana rehetra ireo dia nampidirina tao amin'ny Fampitahana Maxwell hisaintsaina sy hanehoana ny teoriao. Ity teôria ity dia nitarika ny faminaniana ny fisian'ny onjam-peo sy onja onjam-peo.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny tantaram-piainana rehetra, ny tantaran'ny tantara momba ny fampitoviana Maxwell.
1 Maxwell tantaram-piainana
2 Fampitahana Maxwell
3 Manan-danja ny fampitoviana Maxwell
4 Ny lova
Tadidio fa ny mpahay siansa rehetra dia manomboka amin'ny asa nataon'ny mpahay siansa taloha hafa. Ity teny ity dia nambaran'i Newton tao amin'ny andian-teny hoe "Ny siansa rehetra dia miasa eo an-tsoroky ny olona goavambe". Midika izany fa ny ankamaroan'ny fampisehoana dia vita noho ny asa efa nataony mpahay siansa hafa. Ity zava-misy ity dia marina indrindra amin'ny tranga Maxwell satria afaka nampifangaro ny fahalalana rehetra efa nisy nandritra ny 150 taona momba ny sanganasa asany izy. Amin'izany no ahafahanao maneho ny fitsipiky ny herinaratra, ny maherifo, ny optika ary ny fifandraisan'izy ireo ara-batana.
James Clerk Maxwell dia teraka tany Edinburgh tamin'ny 1831. Kilasy antonony ny fianakaviany. Naneho fahalianana hafahafa foana ity lehilahy ity hatramin'ny fahazazany. Vao 14 taona monja aho dia efa nanoratra taratasy. Tamin'ity taratasy ity dia nofaritako ny fomba mekanika voalohany ahafahana mitsabo ny fiolahana. Nianatra tao amin'ny anjerimanontolon'i Edinburgh sy Cambridge izy izay nahagaga ny mpianatra sy ny mpampianatra nanome ny fahaizany mamaha olana amin'ny isa. Ny olana rehetra dia nipoitra tamin'ny taranja matematika sy fizika izay sarotra ho an'ny mpianatra sisa.
Tamin'ny faha-23 taonany dia nahazo diplaoma tamin'ny matematika tao amin'ny Trinity College izy ary roa taona taty aoriana dia afaka nahazo toerana ho Profesora ny Filozofia tao amin'ny Marischal College, Aberdeen. Nijanona tao amin'ity tranokala ity nandritra ny 4 taona izy ary nanamboatra fahalalana marobe. Tamin'izany fomba izany dia afaka nahazo toerana mitovy amin'izany izy tamin'ny 1860 fa tao amin'ny King's College, London malaza. Manodidina io fotoana io no nanomboka ny fotoana mahavokatra indrindra tamin'ny asany manontolo. Ao amin'ity toerana ity dia nisy toekarena tsara lavitra kokoa izay namela azy hanao andrana sy hitsapa ny teoria.
Ny fampitovian'i Maxwell angamba no lova tsara indrindra navelan'ity mpahay siansa ity. Satria nitombo ny haavony sy ny fandraisany anjara tamin'ny siansa, Afaka niditra tao amin'ny Royal Society izy tamin'ny 1861. Tao no niverenan'ny besinimaro na ny teôlôjia elektromagnetika momba ny hazavana niaraka tamin'ny fianakaviany tany amin'ny tranon'ny ray aman-dreniny tany Ekosy. Voatendry ho talen'ny laboratoara Cavendish any Cambridge izy tamin'ny 1871. Maty noho ny homamiadan'ny kibo izy tamin'ny faha-48 taonany tamin'ny 1879.
Izy io dia ny famoahana ilay lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe "Teoria mavitrika amin'ny sehatry ny electromagnetic" izay niseho voalohany ireo fampitahana nataon'i Maxwell. Ireo fampitoviana ireo dia ireo izay afaka maneho amin'ny fomba mazava sy fohy ny lalàna fenomenolojika rehetra momba ny herinaratra sy ny maherifo. Tokony ho ao an-tsaina fa izy ireo dia namboarina hatramin'ny taonjato faha-XNUMX sy niankina tamin'ny lalàn'i Ampère, Faraday ary Lenz. Amin'izao fotoana izao dia nampidirina Heaviside sy Gibbs ny an-tsary nampiasaina, taona maro taty aoriana.
Manan-danja ny fampitoviana Maxwell
Ny sandan'ireto fampirantiana ireto dia tsy mitoetra amin'ny fampifangaroana ny hevitry ny mpahay siansa rehetra izay manome vaovao momba ny herinaratra sy ny maherifo. Ary izany ve Ny fampitahana nataon'i Maxwell dia nanambara ny fifandraisana akaiky eo amin'ny herinaratra sy ny magnetisma. Ny fampitahana hafa dia azo esorina amin'ny fampitovian'izy ireo, toy ny fampitoviana onja izay nanambara mialoha ny fisian'ny onjam-piainana elektromagnetika afaka manaparitaka amin'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana.
Avy amin'izany no azo nanatsoahana hevitra fa ny hazavana sy ny magnetisma dia lafiny iray amin'ny fananana mitovy ary ny hazavana dia fikorontanana elektrômanetika. Misaotra an'izany, ny asan'i Maxwell dia nanamboatra ny synthesize sy nampitambatra ny optika amin'ny electromagnetism ary nanambara ny fotom-pianarana elektromagnetika ananan'ny hazavana. Ny fotom-pahazavana elektromagnetika an'ny jiro dia vokatry ny fanandramana tao amin'ny laboratoara ary notontosain'ny mpahay fizika alemanina Heinrich Hertz tamin'ny taona 1887, taona taorian'ny fahafatesan'i Maxwell.
Izy io dia azo atao amin'ny alàlan'ny fananganana oscillator izay miasa ho emitter sy resonator izay niasa ho mpandray. Noho ireo fitaovana ireo dia azo atao ny mamorona onja sy mandray azy ireo amin'ny toerana lavitra ary izany dia nahatonga ny injeniera Italiana iray antsoina hoe Guillermo Marconi dia afaka nanamboatra ny teknika hamoronana revolisiona teknolojia. Fifandraisana amin'ny radio ity revolisiona teknolojia ity. Ny sasany amin'ireo singa isan'andro ananantsika ankehitriny, toy ny telefaona finday, dia mifototra amin'ity haitao hitan'i Guillermo Marconi ity.
Ireo antony rehetra ireo dia ampy hino fa ny fampitovian'i Maxwell, izay mety ho toa teorika kokoa tamin'ny voalohany noho ny siansa ifotony, dia niafara tamin'ny fampiharana lehibe tamin'ny haitao ankehitriny. Ny fampiharana ny fampitoviana an'i Maxwell dia tonga hanova izao tontolo izao amin'ny fomba toy izany afaka mifandray lavitra amin'ny alàlan'ny fampiasana telecommunications isika.
Ireo famoahana rehetra ireo dia tsy voafetra ho an'ny teoria elektromagnetisma sy hazavana ihany. Ataovy ao an-tsaina fa Maxwell dia mpahay fizika somary nahaliana ihany koa izay nandinika ny kinetika ny entona sy ny thermodynamika. Ireo lafiny ireo dia nampiharina tamin'ny fomba fanadihadiana statistika isan-karazany mba hamaritana ny mety hitrangan'ny sombin-tsolika amin'ny entona maloto manana haingam-pandeha. Ity hita ity dia Androany dia antsoiny hoe fizarana Maxwell-Boltzmann.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fampitoviana Maxwell sy ny maha-zava-dehibe azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Fisarahana » Fampitahana nataon'i Maxwell